अचाक्ली मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता «
विगत दुई हप्ता पहिलादेखि बजारमा सामान छुँदा पनि मूल्य लाग्छ कि जस्तो आभास हुन थालेको छ । तरकारीको मूल्य यति धेरै अचाक्ली रूपले बढेको छ कि तरकारी उपभोग गर्ने अधिकांश उपभोक्ताले धेरै नै मूल्य तिरेर उपयोग गरिरहेका छन् ।
कोरोना महामारीबाट जबरजस्ती भर्खर खुलेको बजारमा एकपछि अर्को चर्काे समय र परिस्थितिको सामना गर्न बाध्य बनिरहेका छन् उपभोक्ताहरू । लकडाउन हुनुपूर्व मानिसहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू कतै भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा जस्तै चरम अभाव त हुने होइन भनी यस लकडाउनमा पनि मानिसले खाद्यान्नलगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्री सञ्चित गरेर राख्दा न्यून र मध्यम वर्गका मानिसको दैनिकीमा नराम्रो असर गरेको थियो । जहिले पनि विभिन्न बहानाको नाममा यिनै न्यून र मध्यम वर्गीय मानिसले हैरानी र सास्ती भोग्नुपरेको तीतो यथार्थको अन्त्य कहिले होला ?
जबरजस्ती खुलाइएको लकडाउनसँगै नेपालमा देखिएको मनसुनी हावापानीका कारण ठाउँठाउँको बाटाघाटाहरू बाढी, पहिरो र डुबानको बाहानामा अचाक्ली मूल्य वृद्धि हुँदा नागरिकले आफ्नो दैनिक कसरी चलाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । यसतर्फ कसको ध्यान जाने होला, थाहा छैन ।
आजको दिन १ सय रुपैयाँमा त १ केजी कुनै पनि तरकारी आउने स्थिति छैन । भान्सामा चाहिने अधिकांश तरकारीको मूल्य दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । सधैं आलु १ सय रुपैयाँ धार्नीमा पाइँदै थियो, तर आज त्यही आलुको मूल्य २ सय रुपैयाभन्दा बढी पर्न थालेको छ ।
एकातर्फ कोरोना कहरले सयौंको रोजगारी जोखिममा परिरहेको स्थिति छ भने अर्कातिर भएका रोजगारी पनि रोजगारदाता कम्पनी, संघसंस्थाहरूले पूरै पारिश्रमिक दिने स्थिति नभएको र कतिपय रोजगारदाताले तोकेरै बेतलबी बिदा बस्न आग्रहसमेत गरिसकेका छन् । ती न्यून आय भएकाहरूले आफ्नो भान्सा महँगो भएको देख्दा आफूहरू लकडाउन र कोरोनाको चरम चेपुवामा परेको बताएका छन् ।
सरकार तथा नियमनकारी निकायले चाडपर्व केन्द्रित अनुगमन नीति लिएकाले त्यस यताउता मूल्यवृद्धिका समाचारहरू आउँदा पनि ती निकायहरू कानमा तेल हालेर सुने–नसुनेझंै गरेर बसेका छन् । कतै तिनै निकायहरूले कालोबजारिया र अचाक्ली मूल्य वृद्धि गर्नेलाई आश्रय त दिइरहेको छैनन् ?
जनताले राज्य तथा सम्बन्धित निकायसँग ठूलो आशा र भरोसा गरेका हुन्छन् । विभिन्न कपोकल्पित र नाटकीय बहानामा बढाउने मूल्यवृद्धिले नागरिकले कसरी आफ्नो दैनिकी कसरी चलाउने सरकार ?
नेपालको अर्थतन्त्र निर्यातमुखी अर्थतन्त्र नभएर आयातमुखी अर्थतन्त्रमा आधारित रहेको छ । यस प्रकारको मूल्यवृद्धि यथावत् रहिरहने हो भने नेपाल र नेपाली जनताको ठूलो धनराशि बिदेसिने निश्चित छ । विदेश जाने अर्बांै रकमले नेपाल र नेपालीहरूलाई दिन–प्रतिदिन गरिबी निम्त्याउने निश्चित नै छ । नेपाल सरकारले खाद्यान्न र कृषिमा क्रान्ति ल्याउने सपना आजको यश अचाक्ली मूल्यवृद्धिले तुहिएको अनुभूति हामी जनतालाई भएको छ ।
कृषिक्रान्तिका नारा अघि सारेर नागरिककै ढाड सेक्ने मूल्यवृद्धि जबसम्म रहिरहन्छ तबसम्म सरकारले नागरिकका आँखामा छारो हानेर नागरिकको छातीमा छुरा चलाएको अनुभूति हामी जनताले गरिरहनेछौं ।